Ọkwa China Weight Glass Weight CW269 Nlụpụta na ụlọ nrụpụta | AOLGA
Ebu arọ: 3KG-180KG
Batrị: 2x1.5V AAA
Ihe: ABS+iko dị ọkụ
Njirimara: Ngosipụta LED anaghị ahụ anya; Akpaaka ịtụ & mechie; Ike dị ala na oke ibu; 4 ihe mmetụta dị elu maka nkenke dị elu; Igwe na -atụkọta ọnụ; Ibu arọ, kọmpat na dị mfe
• 30CM*30CM ikpo okwu iko nwere nnukwu ihu, dị mma iguzo maka ịtụ ihe, ọ dabara maka ọtụtụ ndị nwere nha ụkwụ dị iche iche.
4 ihe mmetụta dị elu
• 4 ihe mmetụta dị elu dị elu n'ụkwụ nha na -eweta nkenke dị elu yana obere njehie.
Ngosipụta LED anaghị ahụ anya
• Ngosipụta ọkụ LED anaghị ahụ anya n'elu, enweghị ike ịhụ ọkụ ọkụ LED mgbe anaghị eji ya mgbe LED ga -egosi mgbe ị tụtara ya, nke na -eme ka ọ dị ọcha karịa. Nọmalị, ọnụ ọgụgụ na -acha ọcha na -acha ọcha na -acha ọcha, ebe ọnụ ọgụgụ ojii na -acha ọbara ọbara.
Akwa nkenke erikpu:
• Enwere ike ịmata otu iko mmiri nke ọma na uru ngụsị akwụkwọ bụ naanị 10g.
Akwa arụmọrụ mgbawa:
• Ịrụ ọrụ ọsọ ọsọ, enweghị nchere, ịrụ ọrụ nke ọma.
Ngosipụta zoro ezo:
• Ìhè doro anya ma dị nro dịkwa n'abalị
• A na -ejikọta ya na nha mgbe enweghị ihe eji eme ya, a na -egosipụtakwa ọgụgụ ya nke ọma mgbe ọ na -atụ ihe.
• Ngosipụta LED nke zoro ezo, ọgụgụ doro anya ehihie na abalị.
Ọgụgụ isi akpaka mgba ọkụ Gbanyụọ/gbanyụọ:
• Mgbanwe akpaaka Gbanyụọ/Gbanyụọ na -egbochi ime mgbanwe ntuziaka ma kwalite ya na ihe mmetụta ike ndọda nwere ọgụgụ isi, nke dabara adaba na ịchekwa ike.
Ejikọtara ọnụ dị elu:
• Mma a haziri nke ọma, elu buru ibu, ịdị arọ dị mma karịa.
Dị fechaa, kọmpat na dị mfe:
• Na -enweghị nnukwu anya, enwere ike idobe ahụ dị mfe.
• Enwere ike ịchekwa ya n'ụzọ dị mfe n'akụkụ ọ bụla, dị mfe ma maa mma.
• Nhazi okirikiri anọ na ụdị ụdị akwa na-eweta ike karịa.
Humanized ọdịdị imewe:
1. Nnukwu akụkụ gbara gburugburu ejiri aka mee, dị larịị ma dị nro, na-ebelata mmebi nkukota.
2. Mpe mpe akwa ụkwụ na rọba na-adịchaghị ike na-eme ka ọ kwụsie ike na mgbochi mgbochi iji nwee nchekwa okpukpu abụọ. A na -echebe ihe ndị dị mkpa maka ogologo ndụ.
3. Ihe polymer na ala.
4. Ịkpụzi otu ibe, ihe na-egbochi uzuzu na mmiri iji kpuchie isi ihe
Ihe ahọpụtara iji hụ na ịdị mma dị elu:
• Iko ụlọ na-eme ka iko sie ike nwere ezigbo nguzogide na nguzogide nrụgide dị elu.
• A na -akpụgharị ihu dị larịị nke ọma, a na -akwalite ahụmịhe ogo ya
• Aluminom alloy
ABS+iko dị ọkụ
Ngosipụta LED anaghị ahụ anya weigh ịtụle & mmechi akpaaka power Ike dị obere yana oke ibu ； 4 ihe mmetụta dị elu maka nkenke dị elu ； Ejikọtara ọnụ ； ịdị arọ, ịdị arọ, dị mfe
Ịtụ ihe Rochie
Batrị 2x1.5V AAA
Nke gara aga: Ọkwa elele ọkụ eletrik na -enweghị atụ ZW320
Osote: Arọ Ibu Elektrọnik CW280
Ọkwa Ibu Ibu
Ọnụ ọgụgụ dị arọ efu
Ọkara Arọ Ọkachamara
Ọkwa Ibu Dị Iche Iche
Ebube Ịdị arọ
Ọkwa Ibu Maka Ụmụ Nwaanyị
Ọnụ arọ nke na -atụba abụba anụ ahụ
0.8L Capsule mbughari ...
BLDC Motor Hair draya ...
Handamụ Steam Steam ...
Glass Electronic itu ...